Kuwedzera kweApple Kudzoka Chirongwa Kuchatanga Mbudzi 25 | IPhone nhau
Gore rega rega, uye kutora mukana weKisimusi yekutengesa inodhonza, Apple inowedzera nguva yekudzoka yezvigadzirwa zvayo, kupfuura mazuva gumi nemashanu ayo anotarisirwa kupa nemutemo. Vakomana vanobva kuCupertino vanoda vanhu vasingazive kana chishandiso cheApple chinogona kusangana nezvinodiwa zvavari kutsvaga, kuti vakwanise kuzviedza kupfuura mazuva gumi nemashanu anodiwa nemutemo uye kuwedzera nguva yekudzoka yezvigadzirwa zvavo ndiyo nzira yakanakisa, mushandisi ane yakawanda nguva yekuyedza chigadzirwa chako, woiongorora uye wotarisa kana zviri chaizvo zvauri kutsvaga.
Apple yanga ichiwedzera nguva yekudzoka kwemakore akati wandei nechikonzero chakareruka: nekuti inoshanda uye ruzhinji rwevashandisi vanozvishingisa uye pakupedzisira havadzore chigadzirwa. Gore rakapera, Apple yakatanga kupa nguva yekudzoka yakareba munaNovember 10, zvisinei gore rino, eIzwi iri richatanga muna Mbudzi 25, richishanda kusvika Zvita 25 kuitira kuti zvigadzirwa zvese zvatinotenga munguva iyoyo zvigone kudzoserwa kusvika Ndira 8, 2018 muUnited States, Canada neAustralia.
Gore rakapera muEurope, nguva yakatarwa yakawedzerwa kusvika muna Ndira 20, asi mukushayikwa kwesimbiso yepamutemo kubva kuCompertino-based kambani, zvinonyanya kuitika kuti ichave iri rimwe zuva gore rino. Zvigadzirwa zvinova chikamu chekusimudzira izvi ndeye iPhone, iPad, Mac, Apple Watch uye Apple TV, ichisiya makadhi echipo nekuda kwezvikonzero zviri pachena. Zvese zvigadzirwa zvinogona kuvhurwa uye kushandiswa asi zvinofanirwa kudzoserwa pane inoenderana zuva mune yakakwana mamiriro uye neyepakutanga kurongedza kana isu tichida kudzosa mari yacho.
Kunyatso kuva nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvatakatenga panguva ino chikamu chekusimudzira ichi kuwedzera nguva yekudzoka, tinofanirwa kutarisa risiti yekutenga kana invoice, uko nemutemo nguva yekudzoka yakanyanya yechinyorwa chatakatora inofanirwa kuratidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Kuwedzera kweApple Kudzoka Chirongwa Kicks Kubva Mbudzi 25
Apple inoburitsa beta 3 yeIOS 11.2, tvOS 11.2 uye watchOS 4.2 yevagadziri